Home AKOTKỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ AKW FOKWỌ Ndị egwuregwu bọọlụ France Olivier Giroud Child Story Story Ihe omuma
LB na-egosi Full Story of a Football Genius kasị mara aha na aha njirimara; "Onye mara mma nke mara mma". Ụmụaka anyị bụ Olivier Giroud Akụkọ gbasara akwụkwọ akụkọ na-adịghị mma Eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị a ma ama site na nwata ruo n'oge. Ihe omumu ya bu ihe omuma ya tupu ama aha ya, ndu ezinulo ya na otutu ndi mmadu.
Ee, onye ọ bụla maara banyere ikike ya mana ole na ole na-ele Olivier Giroud Biography nke na-akpali mmasị. Ugbu a na-enweghị n'ihu adieu, hapụ Amalite.
Olivier Giroud nwa akụkọ akụkọ na -Ndụ mbido
A mụrụ Olivier Giroud na 30th nke September 1986 na Chambéry, n'ebe ndịda ọwụwa anyanwụ France.
Kemgbe ọ bụ nwata (ọ bụrụ na ọ bụ onye agadi 6), ọ na-enwe mmasị na football site na nwanne ya nwoke nke okenye, bụ Romain Giroud nke bụ 10 afọ ya.
Olivier jupụtara ụjọ nke ọdịda ọbụna tupu ya amalite ọrụ ya. Nke a mere ka ọ hụrụ na ọ ga-akwụsị ọrụ nwanna ya. Nwanne ya kpebiri ịkwụsị ịgba ụkwụ ka ọ ghọọ onye na-edozi ahụ. Roman mere ka ndị mụrụ ya nwee mmechuihu n'ihi na ha emeghị ihe nlereanya dị mma.
E wezụga ọrụ egwu, obere Olivier na-atụ ụjọ nke 1980s ụdị egwuregwu 'Alf' mgbe ọ bụ nwata. Ọ na-ekwukarị otú ụmụnne ya ndị okenye si jiri ya na-akarị ya banyere egwu ọ na-atụ maka kpakpando helcom hụrụ n'anya.
N'agbanyeghị enyi Alf, enyi Olivier enweghị mmasị na ọdịmma nke anụ ahụ.
Mgbe a jụrụ ya banyere ihe ọ kacha atụ ụjọ, Giroud kwuru, sị: 'Nwanne m nwoke na-akarị m banyere ụmụaka TV ndị a na-akpọ Alf. Ụjọ jidere m nke ukwuu n'ihi na ọ dị njọ. Nwanne m na-ekwu, sị, Lezie anya, Alf ga-enweta gị n'abalị a! ' Ọ na-agabiga ya ókè!
Mgbe ndụmọdụ bara ezigbo uru, nwa okorobịa Olivier kpebiri inye football ịgba ọsọ. Nke a ka o mere iji mee ka otuto ahụ laghachiri n'ime ezinụlọ ya nke a na-elebu "Ezinụlọ nke ndị na-agba ọsọ ụkwụ"
Olivier Giroud nwa akụkọ akụkọ na -Ọrụ na Nchịkọta
Olivier Giroud zụlitere n'obodo nta dị nso na Froges, nke dị nso na Grenoble. Ọ malitere ọrụ ịgba chaa chaa maka ụlọ ọgbakọ ya, Olympique Club de Froges.
Olivier Giroud Care Care Start
Ọ nọrọ ọzụzụ na isii na ụlọ nkwonkwo tupu ya abanye na Grenoble ọkachamara mgbe ọ dị afọ 13.
N'ịbụ onye hụrụ ihe mere Romain, e zigara ya Istres n'olu nke atọ, ọ bụ nnọọ ihe kụrụ aka mgbe ụlọ ọrụ ya kụrụ ya maka ire ere, na-ekwu na ya enweghị àgwà ndị ọ ga-egwu egwu.
Olivier Giroud tụrụ egwu nke a. N'okwu ya .... O kwuru, sị: "Aghaghị m ịmaliteghachi na nkeji ala," ka ọ na-ekwu. "Ma anaghị m ada mbà."
Olivier nakweere ihe mgbu ya wee mee ka ọ bụrụ akụkụ nke nganga na ngwaahịa. Ọ na-agbasi mbọ ike ka ọ gaa.
O mesịrị sonye na Ntugharị na 2008. Na oge nke abụọ ya na Tours, ọ bụ onye nchịkọta nke otu na 21. na-akpali ya ịkwaga Montpellier n'elu ụgbọ elu.
Nwa Olivier Giroud-Career Story
Giroud bụ onye nchịkwa kacha elu na ihe mgbaru ọsọ 21 na oge 2011-12, na-enye ọgbakọ ahụ mbụ ha Ligue 1 mbụ tupu ha akwaga Arsenal. Ndị ọzọ dị ka ha na-ekwu mgbe niile, nwere ụlọ ha na-akpọ ụlọ.
Olivier Giroud nwa akụkọ akụkọ na -Ndụ Ezinụlọ
Akụkọ na-ekpughe na Olivier Giroud sitere na nzụlite ezinụlọ. A maghị banyere nna ya na nne ya ka ha kpebiri ịnọpụ kpam kpam site na mgbasa ozi.
NNE: Dị ka e kwuru na mbụ, Olivier nwere nwanna nwoke tọrọ ya, bụ Romain, bụ onye na-abụkwa ndị ịgba egwu. Ọ na-egwuri egwu na ụlọ akwụkwọ Auxerre ma na-anọchite anya France n'okpuru n'okpuru 15 na n'okpuru 17, tinyere ndị egwu dịka Thierry Henry, David Trezeguet na Nicolas Anelka, ma ọ bụ ịhapụ ọrụ ọkachamara ị ga-eji na-amụ ma ghọọ onye na-edozi ahụ.
Olivier na-echeta. "A zụrụ ya na Auxerre, ọ bụ olileanya, ma ọ dịghị mgbe ọ nwere ọrụ ọrụ". Romain laghachiri ịmụ, wee ghọọ onye na-edozi ahụ.
Olivier Giroud nwa akụkọ akụkọ na -Ndụ mmekọrịta
Giroud lụrụ Jennifer ebe 2011.
Olivier Giroud na nwunye Jennifer
A mụrụ nwa ha nwanyị bụ Jade na June 18, 2013.
Nwunye Olivier, Jade Giroud mere papa ya ka o mata otua nne na nna siri ike. Olivier Giroud bụ onye na-ejikarị ụmụaka eme ihe ga-eme ka oge dịkwuo iji kwalite na ịkwado mmepe nke nwa ya.
Na November 2015, Olivier na Jennifer Giroud gosipụtara ime ime Jennifer na teepu uhie nke Galatia Global Gift na London. Na March 7, 2016, Jennifer mụrụ nwa nwoke aha ya bụ Evan. Giroud na-enye nwa ya nwoke ihe mgbaru ọsọ ya, Evan onye ọ na-enwe mmasị na ya.
Dịka na October 2017, di na nwunye ahụ na-atụ anya nwa nke atọ.
Olivier Giroud nwa akụkọ akụkọ na -The Scandal
Na February 2014, ihe ọjọọ mere ka oyiyi olivier Giroud mara. Ọ gụnyere akwụkwọ nke imebi foto, na akwụkwọ akụkọ Bekee kwa ụbọchị Anyanwụ. Foto a na-ekpughe mmekọrịta dị n'etiti Olivier Giroud na Celia Kay, ihe nṅomi nke lingerie.
N'otu aka ahụ, Na February 2014, Giroud kwetara na ọ na-aghọ aghụghọ na nwunye ya na ihe nlereanya Celia Kay.
Mgbe ihe merenụ gasịrị, ọ rịọrọ nwunye ya mgbaghara ma mesịa sie ọnwụ na ya akwabeghị iko. Wenger ekwughị okwu banyere okwu ahụ ọ chọrọ "Sọpụrụ onwe ya".
Celia Kay wepụtara oge ya iji zaghachi ndị nkatọ banyere mgbasa ozi mgbasa ozi.
Giroud na nwunye ya kpebiri na ọ dịghị ihe ọ bụla gbasara ịgba alụkwaghịm ha.
Raheem Sterling, Edinson Cavani na Anthony Martial etinyewo aka na ịghọ aghụghọ ule dị ka Olivier.
Olivier Giroud nwa akụkọ akụkọ na -Ihe aka
Giroud nwere aha na France n'ihi na ị bụ àgwà mara mma ma mara nma. Na 2014, ọ malitere ihu Hugo Boss's Onyeisi Bottled ụmụ nwoke na-esi ísì ụtọ.
Na February 2015 Giroud amazuru oke 'Player Premier Player'. Na N'ajụjụ ọnụ GQ, o zoro aka David Beckham dị ka mmụọ nsọ maka ụzọ o si ele anya, na-ekwu na Beckham si "Ịke bụ akara ngosi".
Olivier Giroud nwa akụkọ akụkọ na -Religion
Giroud bụ onye Katọlik ma nwee egbu egbu na aka nri ya n'aka Abụ Ọma 23 n'asụsụ Latịn: "Dominus regit ma na-eche na ọ bụ" ("Onyenwe anyi bu onye nlekota m, agaghm acho").
Ọ na-akọwa onwe ya dika "Onye kwere ekwe [...] Anaghị m agafe tupu m egwu ma ana m ekpe ekpere n'ime obi m"
Olivier Giroud nwa akụkọ akụkọ na -Bromance na Koscielny
Giroud na Koscielny bụ ndị otu na Tours FC na oge 2008-09. Ha bụ otu ụzọ a na-apụghị ịgụta ọnụ nke na-ejikọta ọnụ ọnụ na ụlọ mgbakwasa, bọs, foto ndị otu, ọzụzụ, tennis na ọbụna nri abalị. Mgbe o kwusiri ike ịkwaga Arsenal, Giroud kwuru na Arsenal bụ nnukwu ụlọ nwere nnukwu onye nkụzi French, na bro "LoLo" na-egwu egwu n'ebe ahụ.
Koscielny na-akpọkwa "Bosscielny" or "Kasị Onyeisi ahụ," n'etiti ndị òtù ya na ndị fan.
Olivier Giroud nwa akụkọ akụkọ na -Style nke Play
Giroud nwere ike igwuri egwu n'ọtụtụ ebe, ma ọ na-arụ ọrụ dị ka onye na-eti ihe ma ọ bụ dị ka ebe ọ ga-aga n'ihu. A na-ejikwa ya mgbe ụfọdụ dịka onye na-egbu ya. Onye na-arụ ọrụ na-arụsi ọrụ ike, a maara ya karịsịa maka ọnụ ọgụgụ ihe mgbaru ọsọ ya a pụrụ ịdabere na ya, nha, ike, isi okwu ziri ezi, ike dị ike, ike ijigide bọl na azụ ya na ihe mgbaru ọsọ, na ijikọ egwu. Ọ na-ejikọta ya na ị na-agba ọsọ n'ihu ụlọ ọrụ ndị ahụ na-akwado ya
Olivier Giroud si 'akpị agba ' bụ onye na-ese okwu maka Mgbalị nke 2016 / 2017 Season.
Ọ bụrụ na ị nyochaa ọrụ Giroud site na ọnụ ọgụgụ ahụ, ị ​​ga-achọpụta na Giroud na-egwuri egwu mgbe niile na klọb ndị gara aga n'enweghị ajọ mmerụ ọ bụla. Ị ga-enwe DNA nke Park Ji-Sung, Dirk Kuyt na Ox (anụmanụ, ọ bụghị Oxlade-Chamberlain) iji nọgide na-arụ ọrụ dị otú ahụ.
Giroud nke French nke France na-abụ ọkacha mmasị ọkacha mmasị ebe ọ bụ na ya na Gunners nọ na 2012. Ọtụtụ ndị Fans emetụtawo ụdị ntutu isi ya. Ụfọdụ enwetawo nsogbu dị ka nwata nọ n'okpuru.
A na-amachibidoro nwata nwoke ahụ dị afọ itoolu n'ụlọ klas n'ihi na o mere ka ntutu isi ya dị ka kpakpando Arsenal bụ Olivier Giroud.
E zigara Danny Purdy ebe ọ na-akwa ákwá mgbe ọ gwachara ya ka ọ dị ọhụrụ, azụ na akụkụ dị iche iche na-emebi iwu ụlọ akwụkwọ.
Nne ya, Sarah chere na ya ga-ewepụ ya na Brooklands Middle School na Leighton Buzzard, Bedfordshire, kpamkpam. Sarah, nne nke abụọ, 33, ga-ajụ ụlọ akwụkwọ ahụ maka ihe ọ ga - eme ka Danny nwee ike ịbịa n'ụlọ ruo mgbe edozi usoro.
Ọ sịrị: "Anyị echeghị na ntutu isi dịka Danny's na-emebi iwu. Ọ bụrụhaala na ụmụaka na-eji uwe ejiji akwụkwọ ha nke ọma ma na-arụsi ọrụ ike n'ụlọ akwụkwọ, anaghị m ahụ ihe nsogbu ahụ bụ. Anaghị m eguzo ma lelee ha ka nwa m wee chee na ọ bụ onye a na-asọ oyi na-ewepụ ya na nkuzi. Echere m mgbe niile na anyị na-eche echiche anyị na ọ bụghị ntutu isi anyị, ma ọ bụghị nke ọma. "
Otú ọ dị, onye nkụzi bụ Steven Harrington-Williams kwadoro ụlọ akwụkwọ ahụ. Ọ sịrị: "Nso iketịbe ke enye ama odụk ufọkn̄wed ye akwa otu ntutu ntutu esie nte Olivier Giroud. Ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ isi ahụ mgbe ndị ọzọ dị ogologo. Anyị anaghị atụ anya na ụdị ntutu isi na ụlọ akwụkwọ. "
E mechara cheta Danny Purdy mgbe ọ na-akpụcha ntutu isi ya na Olivier Giroud na ihe ọmụmụ banyere iwu edozi maka ụmụ akwụkwọ.